About Us - Hebei Textiles Dhimoni Duku & Exp.. Co., Ltd.
Hebei Textiles hwagadzwa muna 1974, iri Shijiazhuang City, Hebei Province.
"Kubatana, kushingaira, kushanda uye kuzvitsaurira" kwagara yedu mweya zvebhizimisi kubva kwayo pakagadzwa. Tava kukwanisa pamwero uye nokukurumidza kukura nebasa rakaoma uye kupayona nesimba. Boka redu ane mukurumbira wakanaka kumba uye kunze. tiri vanopupurirwa zvebhizimisi kuti ISO 9001, tsika AEO Senior certificated vachida. Kunze, tiri AA Customer pamusoro Sinosure uye ekisipoti mutero rebheti A kugiredhi Enterprises.
Boka redu riri vakazvipira kupa rizere-siyana yepamusoro vakarongeka mabasa uye yepamusoro zvigadzirwa, tichishumira vatengesi nevatengi pose. Pashure pemakore 40 kuramba kukura, zvishoma nezvishoma vakaumba pamusoro-pasi ekisipoti chikwata dzomutambo okutengesa ruzivo uye operative nezvaanogona, zvigadzirwa zvaisanganisira hwakawanda munyika uye kunzvimbo dzakadai Europe, America, Asia, Africa, uye Australia. Chekambani negore imupota uye ekisipoti vhoriyamu pokutanga mune pamusoro 30 Hebei Province. Boka wedu wepagore imupota uye ekisipoti vhoriyamu muna 2017 vakapfuura mamiriyoni 100 US emadhora.
The dzakatevedzana glycine zvigadzirwa wakashanda kubudikidza kambani yedu, kuvimba munyika guru glycine kugadzirwa chawo - Hebei Province, China apo takavaka zvikuru inokosha tikabatana rayo fekitari huru dzinotambudza. Uye maererano nopindirana mikana, tinopa zvizere kutamba yedu dzaari zvakanakira. The chikuru zvigadzirwa ndiyo Glycine, Glycine chelate, Pharmaceutical intermediates nezvimwe Amino acids. Takashanda nesimba kuongorora mumusika dzakawanda uye kushumira vanoshandisa pose vane high quality, yakatsiga zvinhu uye zvemakwikwi mitengo.
Mutengi zvinodiwa muri dzedu zvinodiwa basa, uye mutengi kugutsikana ndiro basa redu chipfuro. Tiri kuda kumisa pakuvimbana uye vanobatsirwa pamwe ukama newe kwenguva refu uye connive ane chirongwa kukura pamwechete.
Address: No.42 Xisanzhuang mumugwagwa, Shijiazhuang, Hebei, China
Nei vanhu kutora glycine?